Izwe leLizwe lasePortland - Ihlabathi leLizwe leNqobo 28
I-TV kunye neFilimu Imiboniso yeTV
'Izwe leLizwe lasePortland' - Ukudibanisa I-Cast of 'World Real' 28 '
01 ka 09
'Ihlabathi leLizwe lasePortland'
Kwixesha lama-28 leenqobo zalo ezihloniphekileyo, i -World Real , i-MTV iphendule ePortland, e-Oregon isixeko esaziwa ngokuvuma ukuhlala ngokuluhlaza, ukuhamba ngebhayisikili, iinqwelo zokutya, ubugcisa be-DIY, i-punk rock, iiklabhu zokuqhawula kunye nabemi bayo abahlukeneyo.
Xa iLizwe leLizwe langempela ePortland ngoLwesithathu, ngo-Matshi 27 ngo-10PM lwaseMpuma / iPacifi, abantu abangaba ngabathandathu abasemzini baya kungena endlwini ePortland yeSithili sasePearl. Ukongeza kwindlala yokuhlala yokulala, iimbambano kunye neemfihlelo; I-MTV ithembisa ukuba eli xesha liza kufaka ilungu elishiyekileyo liphuma kusasa kwaye omnye umyeni, abo bathi "mhlawumbi unobungqina obubi kwiNkcubeko Yehlabathi Yona " kwaye kuthiwa isebenzisa "imfazwe yengqondo kunye nesondo" malunga nelinye ilungu elithile.
Ukudibanisa nabantakwabo belizwe leLizwe lasePortland kule dilesi yesithombe kunye ne-bios.
I-Anastasia 'yeLizwe leLizwe lasePortland'
U-Anastasia uhamba ngegama lomnxeba "I-Bird." Uneminyaka eyi-5'11 kwaye wenze enye imodeli kodwa usengumdlali onothando okhumbula ukuba ungumfundi ophakamileyo wesikolo esiphakamileyo.
Usasahla ukusuka ebuntwaneni kunye noyise onxila kunye nokulahlekelwa ngumhlobo osondeleyo kumqhubi onxilayo u-Anastasia uye waxhala malunga nokusetyenziswa kotywala okuza kuvela kwiNdawo Yehlabathi Yinyani .
I-Anastasia ibalulekileyo kwi-Journalism.
03 ka 09
Inomdla 'yeLizwe leLizwe lasePortland'
Ihlabathi eliyinyaniso likaPortland Liyamkela livela eMichigan kwaye livela kwiMveli yaseMexico, yaseMelika kunye neYurophu. Njengomyeni wakhe ohlala naye u-Anastasia, Umntu onobubele wayenomntwana obunzima. Ngomama ongekho kunye nonina ongenakulinganiseka, Umntu onobubele waphuma yena ngokwakhe ngexesha elineshumi elinesithandathu.
Nangona intliziyo yakhe iphukile kwaye ingabikho ubudlelwane bokuthandana, Inceba iyintombazana ehamba ngezocansi. Iintlanzi zihamba phakathi kwayo kunye neYangempela yeLizwe likaPortland uJohnny kodwa ingakwazi ukuhlala naye ngesondo? Ngaba uya kukwazi ukumthemba?
Unomdla weza ePortland kunye nenja yakhe, uDaisy, i-Chihuahua-Jack Russell Mix eyabambelela kulo mboniso.
UJessica 'weLizwe leLizwe lasePortland'
UJessica akazange ahlale ngaphandle kweFayetteville, eNorth Carolina, apho akhulela khona kwisiqingatha se-Hispanic, isiqingatha sase-Ireland.
Nangona ubonakala ngathi unobumba obusenyakatho kunye ne-twangy drawl, uJessica unelinye icala lobuntu bakhe othanda ukuloba, ukuzingela kunye ne- motocross . Unemibhobho yamatye amaninzi kwaye angasebenza kwiinjini yakhe.
"Iimvu ezimnyama" zentsapho yakhe, xa uJessica wayeneminyaka eyi-16 ubudala waxhatshazwa nomfana owayeneminyaka elishumi kumdala. Ulwalamano olusekupheleni luphelile kwaye uthi usengamkhangela "uKharts Charming."
05 ka 09
UJohnny 'weLizwe langempela ePortland'
Inkwenkwezi yangempela yasePortland inkwenkwezi uJohn wakhulela umntwana ophakathi kwintsapho e-bluhlaza yase-Ireland ehlala kwidolophu encinane ngaphandle kweBoston. Ngaphambili wayengumdlali we-hockey, xa eqonda ukuba akayi kuhamba phambili waqala ukufunda ukuba abe ngumbhali okanye umqeqeshi. Emva koko iingxaki zezemali zamgxotha esikolweni kwaye zenza umsebenzi njengomsebenzi omfutshane wokupheka.
UJohnny uyakuthanda umcimbi kodwa uya kuphuma xa eselisiwe. Ngokukhawuleza utyhafisa kunye nomntu ohlala naye Unomdla kodwa unkwantyisantwa yintlonelo yakhe yesondo. Ngaba unako ukuwanelisa ngesondo? Ngaba izinto ziza kuba zinzulu? UJohnny akazange abe nolwalamano kwiminyaka emibini.
06 ka 09
UJoi 'weLizwe leNqobo ePortland'
Ephakanyiswe ngumama waseAsia okhuselekileyo kunye noYoy u-5'9 ubaba womkhosi omhlophe, kwaye wadlala ibhasiksi, i-volleyball kunye ne-softball.
Ukuvukela ekukhuliseni kwakhe, i-Joi sports tattoos kunye neengxowa zeengono; uthanda ubulili kunye namadoda amnyama kwaye ucele i- Playboy .
UJoi unesidanga soNxibelelwano kwiYunivesithi yaseWashington.
07 ka 09
IJordani ye-'Izwe leLizwe lasePortland '
IYordan ihlobo lomntu olungileyo kuyo yonke into ayilinga ngayo. Wayengumthetheli webhola yakhe yebhola ephakamileyo, i-baseball kunye namaqela okulwa. Ngoku u- wakeboarder we-semi-professional. Unobuncoma bobuzwe abane kwi-cheerleading ekhuphisanayo. Kwaye wenza konke oko nangona ezalwa ngaphandle kweminwe kwenye yezandla zakhe.
I-Jordan ifuna abanye abantu baphile kwimilinganiselo yakhe ephakamileyo kwaye abanakuze bamkele xa ephosakeleyo-konke okubangela ukungquzulana nabalingane bakhe basePortland. Kwaye ekugqibeleni uyabonakalisa ukuba akazithembi njengokuba ufuna abanye bakholwe.
IJordan ifunda ukuThengisa kwiYunivesithi yaseCentral Oklahoma.
08 ka 09
UMarlon 'weLizwe langempela ePortland'
I-World Real Portland kaMarlon Williams yindodana yomshumayeli kwaye wakhuliswa ngeenqobo ezinzulu zonqulo kunye neenkolelo ezithintekayo kunye nesifiso sakhe sesondo.
Abazali bakhe bahlukanisa ngoxa wayeseneminyaka eli-6 ubudala kwaye wakhuliswa nguyise wakhe wempi kwiziseko ezisehlabathini. Isihlandlo sokuqala ukhumbula ukuba unina wayenomngcwabo wakhe xa ephethe ibanga lesi-7.
Esikolweni esiphakeme uMarlon wayengumgcini we-linebacker weTexas Tech kwaye wafumana ngokuphindwe kabini inhlonipho kwiNgqungquthela yonke ye-Big-12. Wazama ukuya kwiprogram kodwa wachithwa yi-Canadian Football League. Oko kwamthumela ekudakaleni kwaye ngokucacileyo wenza izinto ezithile abahlala naye "baya kutshitshiswa" ukuze bafunde.
Ngoku uMarlon usebenza kwizinga loBunjineli bezoBugcisa kwaye uphishekela umsebenzi wezomculo phantsi kwegama lakhe lokukhumbula, uJay Dillinger.
Khangela olu dliwano kunye noMarlon apho ethetha ngamava akhe, ixesha lakhe kwiLizwe Lwenene kunye nokuba isondo nesinye indoda "senzeke njani."
09 we 09
INia 'yeLizwe langempela ePortland'
UNia waya kwiYunivesithi yaseWoward , apho waphumelela khona i-magna cum laude, kodwa akazange enenhlanhla xa efika ekugcineni umsebenzi, njengoko ekhutshwe kwimisebenzi emine yokugqibela.
Unenjongo eninzi yobungcali, kuquka ukuba umbhali, ububele kunye nomzekelo. Kodwa akayi kukhawuleza ukuba akhule kwaye, eneminyaka engama-23 ubudala, usalugxininisa kakhulu kwi-partying. Nangona unamamitha angama-6 ubude kunye nezemidlalo, uNia uyazibuza ukuba uya kuba ngumzekelo ophumelelayo, ingakumbi kuba engabonakali ukuyeka ukutya okukhawulezayo.
UNia wakhula ekhuselekileyo kwidolophu encinci yasePowder Springs, eGeorgia, kodwa wafudukela eDkt kwikholeji waza wafumana uxhoba lokudlwengulwa komhla. Ilanga elide lilandelwa kwaye alizange lihambe naye.
Ngoku uhlambalaza ngokusondeza ngesondo ngokuxhalabisa uya kuphinda ahlaselwe. Xa ecinga ukuba iJordan ibuhlungu kakhulu kumantombazana endlwini, iNia inokuthi ihambe yenyukliya ngokupheleleyo. Akabizwa ngokuthi 'Iphepho' iNia.
Ukubhalwa kwincwadi yesikhokelo yabasetyhini abafuna ukutshata nomtshato kunye nomdlali wezemidlalo, ngaba uNia uya kulandela enye yendlu?
Ubuncwazi bebantwana be-Oprah Winfrey
Abalingiswa beCopy Sexy
Iimviwo ezi-10 ze-Must-Watch ze "Star Trek: Travel"
'90210' Isikhathi 1 Isiqendu Isikhokelo
Udliwano-ndlebe kunye noMdali 'onguMal' omhle uMarlene King
'Imfutshane yokuYinqoba' iHanky ​​Panky Game
10 Iindidi eziphezulu ze "Star Trek: Deep Space Nine"
Ukudibanisa ne-Bachelorettes ye-Bachelor, i-Season 12
Iingcamango 'zexabiso lilungile' i-T-Shirts
Iyona nto ibonisana ngayo neNkathazo
UHinamatsuri, uMthendeleko weDola waseJapan
Iingcebiso ezikhawulezayo zokubhala phantsi koxinzelelo
Iingqapheli Zeengcali Ngombala
Yenza Uthando LweMogu Mojo Bag
Abaphumeleleyo be-Players Championship Tournament
Indlela Yokufumana Iimali Ezidlulileyo kunye neeFree Simahla zeMidlalo yoMdaka
Uluhlu lwabahlaziyi beMaqabane abesifazana
IYunivesithi yaseNorth Carolina kwi-Pembroke Admissions
I-Great American Classical Composers
I-Gymnastics yama-Olimpiki: iMithetho yeGymnastics yabasetyhini kunye nokugweba
Iingxaki zaBantwana baBantu namhlanje
Ziziphi iiNdlela ezahlukeneyo zokuQala iNjini yeNitro?
I-Tutorial yokuDala iNtloko ye-Manga kwi-3/4
Uhlaziyo olupheleleyo: 2008 I-Kawasaki Iingqungquthela 14 zeMidlalo yeThuthi
U-Anubis, uThixo wokuGcoba kunye neMingcwabo
Uhlobo lweNtsapho yaseGreen Bay Packers IQarterback uAron Rodgers
IiCockey zesiJamani kunye nezenzo
Iingqungquthela ezithandathu ze-Funniest Chevy Chase
Yibani uMongameli oyiNgcwele
Ifom ye-AABA yengoma
Ukwenza iCube Cubes
Iifayile zeFilimu zeGilmore ezonwabileyo